विश्वमै सबैभन्दा लामा खुट्टा भएकी यी १७ वर्षीया किशोरी, बनाइन् विश्व रेकर्ड !:: Naya Nepal
विश्वमै सबैभन्दा लामा खुट्टा भएकी यी १७ वर्षीया किशोरी, बनाइन् विश्व रेकर्ड !
मेरिकाको टेक्सास निवासी १७ वर्षीया किशोरी मेरी क्युरिनले आफ्ना लामा खुट्टाको सहाराले विश्व रेकर्ड बनाएकी छन् । ६ फीट १० इन्चकी मेकीले गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड बनाएकी हुन् ।
रुसका एकातेरिना लिसिनाले बनाएको २५.२ इन्चको पछिल्लो रेकर्डलाई तोडेर मेकीले लामा खुट्टाको रेकर्ड आफ्नो नाममा गरेकी छन् । मेकीको दायाँ खुट्टा १३४.३ सेन्टिमिटर र बायाँ खुट्टा १३५.३ सेन्टिमिटर रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
मेकीले भनेकी छन्, ‘जुन व्यक्तिको शरीर असामान्य विशेषतायुक्त छ, उनीहरूले लजाउनु पर्दैन । त्यसलाई लुकाउनु पनि हुँदैन । यो रेकर्डले ती सबै महिलालाई प्रेरित गर्नेछ, जो अग्ला छन् ।’
मेकीकी आमाका अनुसार उनी १८ महिनाकी हुँदा २ फीट ११ इन्च थिइन् । मेकीलाई लामा खुट्टाका कारण समस्या समेत हुने गरेको छ तर उनले यसको फाइदा समेत उठाइन् ।
मेकीको उचाइ समेत घरमा सबैभन्दा बढी छ । उनी सामाजिक सञ्जालमा समेत चर्चित छिन् ।
सुरू गरौं, राजीव उपाध्यायको हालै प्रकाशित पुस्तक ‘कबाल्स एन्ड कार्टेल्स’ भित्र समेटिएका तीन प्रतिनिधि घटनाबाट। मैले यहाँ संक्षेपमा प्रस्तुत गरेका ती घटनालाई जस्ताको तस्तै पढ्न भने पुस्तक नै उठाउनु पर्छ।
गिरिजाले बिचैमा हाम्रो कुरा काट्दै भने, ‘हामी छिट्टै प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई हटाउँदै छौं। त्यसपछि हामी महेश आचार्यलाई सरकारमा ल्याउँछौ।’
उनले पुदोङमा स्थापना हुँदै गरैको आर्थिक क्षेत्रलाई ‘ड्रागनको शिर’ का रूपमा व्याख्या गरे। भ्रमण दलका सदस्यहरूलाई अर्को बिहान त्यो क्षेत्र देखाउने आफू आतुर रहेको बताए।
यो सबै कुरा भ्रमण दलका एक सदस्य वरिष्ठ वाम चिन्तक तथा पत्रकार सुकदेव नेपाल ‘अग्निशिखा’ लाई पचिरहेको थिएन। उनले हाम्रो सहयोगका लागि खटाइएकी चिनियाँ युवतीलाई सोधे, ‘कमरेड ली फेङलाई के भयो? उनले दिदी भन्ने गरेकी ती महिलालाई के भयो?’
चिनियाँ कम्युनिस्टहरूले वाहवाही गर्दै आएका ती आदर्श पात्रहरूका बारेमा उनले सोधेका थिए। ती पात्रहरू बारे युवतीले अज्ञानता प्रकट गर्दै भनिन्, ‘सायद तिनीहरू काल्पनिक थिए।’
केही सम्झाइबुझाई पछि उनी पुरानो स्वरूपमा फर्किए र भने, ‘चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले धोका दिइरहेको रहेछ। यति लामो समयदेखि ठगिइरहेको थाहा पाउँदा म भावविह्वल भएँ।’
‘तँलाई जेल नपठाई छोड्दिनँ,’ रात्रीभोजको भिडभाडमा कसैको चर्को स्वर सुनियो, ‘पछुताउनु पर्ला, म के गर्न सक्छु हेर्दै राख्नू।’
यी घटनाहरू काठमाडौंको उच्च मध्यम वर्गीय परिवारको एक युवाले देखे-भोगे मध्येका हुन्। मुलुककै ‘उत्कृष्ट’ विद्यालयबाट औपचारिक स्कुले शिक्षा लिएर पहिले मिडिया अनि महत्वपूर्ण दाता विश्व बैंकमा काम गरेर दुई वर्षअघि राजीव उपाध्याय सेवा निवृत्त भएका हुन्। दुवै भूमिकामा हुँदा देश विदेशका नीति-निर्माता र शक्तिशाली व्यक्तिसँग सम्पर्कमा आएका थिए। उपाध्यायले पुस्तकमा खासगरी २०४६ को परिवर्तनपछिको अर्थराजनीतिक प्रवृत्ति उतारेका छन्।
निजीकरण र आर्थिक सुधारका सकारात्मक पक्ष ओझेलमा पारिएको छ। माग र आपूर्तिका आर्थिक नियमले चल्नुपर्ने अर्थव्यवस्थालाई ‘राजनीतिक सहमति’ र प्रशासनिक निर्णयले चलाइएको छ। ‘मेरिटोक्रेसी’ को ठाउँ ‘क्रोनिइज्म’ ले लिएको छ। सरकारको प्राथमिकता पर्नुपर्ने भनिएको शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा सरकारको लगानी घटेको छ। वित्तीय क्षेत्र (बैंक, बिमा र गैर बैंकिङ वित्तीय संस्था) मा सरकारको लगानी बढेको छ।
अंग्रेजी कमजोर भएका पाठकहरूले पुस्तक पढ्दा छेउमा ‘डिक्सनरी’ राख्नुपर्छ। ‘पन्च-लाइन’ पुस्तकभरी यत्रतत्र छन्। कुनै कुनै पन्च-लाइन निशानामा नलाग्दा पाठकलाई खल्लो बनाउँछ। कुनै कुनै अध्याय विकासे प्रतिवेदन जस्ता पनि लाग्छन्। ती अध्यायमा तथ्यांक धेरै प्रयोग भएकाले पुस्तकको लय बिग्रिएको भान हुन्छ।